Awaamiir cusub oo lagu xasilinayo Muqdisho oo Caawa lasoo saaray | Arlaadi
Home Blog Awaamiir cusub oo lagu xasilinayo Muqdisho oo Caawa lasoo saaray
Awaamiir cusub oo lagu xasilinayo Muqdisho oo Caawa lasoo saaray
Jimco June 9, 2017| Arlaadi Online
Kullan caawa Madaxtooyada Soomaaliya ay ku yeesheen Wasiirka Amniga iyo Taliyaasha kala duwan ee ciidanka dowlada ayaa si weyn loogu faaqiday howlgalka xasilinta Muqdisho ee ay wadaan ciidamada isku dhafka ah, waxaana gabo gabadii kullanka laga soo saaray awaamiir cusub.
Wasiirka Amniga gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abukar Islow Ducaale ayaa tilmaamay in qorsha xasilinta Muqdisho uu yahay go’aan ka so baxay Golaha fulinta Xukuumada Soomaaliya, loogana golleeyhahay in Muqdisho noqoto magaalo Nabad ah.
Taliyaha Ciidamada Nabadsugida C/llaahi Sanbaloolshe ayaa sheegay in qorshaha xasilinta caasimudu uusan ahayn mid loogu dan leeyahay koox ama qabiil gaar ah balse uu yahay mid Muqdisho looga sifaynayo Al-Shabaab iyo cid kasto oo hub ku dhex sidata.
Waxa uu Taliyaha NISA sheegay in dagaal maanta ka dhacay Degmada Kaaraan uusan aheyn mid u dhaxeeyay Ciidamada xasilinta iyo ciidan kale oo dowlada katirsan, waxaa uuna tilmaamay dagaalkaasi in uu u dhaxeeyay ciidanka Xasilinta iyo Burcad dooneysay in ay boobto raashin gar gaar.
Taliyaha Ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid ayaa tilmaamay in mas’uuliyiinta dowladda loo samayn doono ciidamo gaar ah, lana furi doono xarun lagu diiwaan geliyo ciidankaasi.
Dhinaca kale Taliyaha Ciidamada Milateriga Jen, Cirfiid oo isna kulanka ka hadlay ayaa ku amray dadka shacabka ah ee degan guryaha Ciidanka Milatariga Soomaaliya in ay si deg deg ah uga baxaan, waxa uuna u qabtay in guryhahaasi lagu baneeyo ilaa 1-da bisha Luulyo.
Kullankan caawa Muqdisho ku yeesheen Taliyaasha Ciidanka dowlada ayaa la iskula gartay in magaalada Muqdisho aan lagu arki karin ciidan hubeeysan oo qorya wata oo aan ka aheyn ciidanka xasilinta , waxaana lagu amray ciidamada ilaaliya masuuliyiinta in ay diiwaan galiyaan soona qaataan dares loogu tala gakay.
Halkan ka Akhriso Amarada caawa ay soo saraeen Taliyaasaha ciidanka Dowlada
1. Askarigii Magaalada Muqdisho qori ku dhex wataa tallaabo Sharci ayaa laga qaadaya waana la xiraya.
2. In Talaabo Sharci ah laga qaadayo cidii lagu arko dharka ama Dareeska Ciidanka Xooga Dalka oo aan Taliska ka tirsaneyn.
3. In Ciidan iyo Gaadiid aan Warqad Fasax wadan aan lagu arki karin gudaha Magaalada Muqdisho.
4. Ciidamada Xasilinta ayaa sugaya amaanka Xarumaha Dowladda iyo amaanka guud ee Caasimada ciidan kale laguma arki karo Muqdisho.
5. In la baneeyo oo laga baxo guryaha ay leeyihiin Ciidamada Xooga Dalka ee ku yaalla Muqdisho 1 July ka dib Shacab laguma arki karo Guryaha Ciidamada Xooga.
6. In aan Cid loogu turin Howlgalada Xasilinta Caasimada iyo Hub ka dhigista cidii ka hor timaaddo Sharciga ayaa la horgeynaya.